3 qof ayaa ku dhaawacantay qarax nooca dhulka lagu aaso ah oo ka dhacay Gaalkacyo. – Radio Daljir
3 qof ayaa ku dhaawacantay qarax nooca dhulka lagu aaso ah oo ka dhacay Gaalkacyo.
Gaalkacyo, Nov, 23 ? Ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhaawacantay qarax nooca dhulka lagu aaso ah oo salaadii maqrib kaddib ka dhacay irida hore ee masjidka Al-bishaar oo ku yaalla xaafada Israac ee magaalada Gaalkacyo.
Wararku waxay intaasi ku darayaan in qaraxaan lagu aasay goob aan sidaa uga fogayn masjidka Al-bishaar, halkaasi oo ay ku kala warqaadan jireen ciidanka madaniga ee xaafada Israac, waxaana dadka dhaawac-may ka mid ahaa madaxiii ciidanka madaniga ah ee xaafada Israac mudane Ilkacase, iyo wiil-yar oo uu dhalay.
Dhinaca kale, qaraxaasi markii uu dhacay kaddib ayaa goobtaasii waxaa soo gaaray ciidamada ammaanka ee magaalada Gaalkacyo, waxaana dhawaqa qaraxaasi laga maqlayay xaafado badan oo ka tirsan Gaalkacyo.
Ma jiro wax war ah oo illaa xilligaan ka soo baxay laamaha ammaanka ee gobolka Mudug, waxaana qaraxaan uu daba-socdaa dilal qorshaysan oo 2-dii 7-aad ee ugu dambeeyay si is xig-xiga uga dhacayay magaalada Gaalkacyo.
Xaallada ammaan ee Gaalkacyo ayaa lagu tilmaami karaa mid maraysa heerkii ugu xummaa abid, waxaana shacabka Gaalkacyo ay ku waabariistaan ka hadlida dilalka iyo qaraxyada maalin iyo habeen ka dhaca magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.